Natolotry ny UNICEF ny « Fahalalana Mahavonjy »
Maro ny aretina mpahazo ny reny sy ny zaza ka mahafaty azy ireo. Misy kosa ny fihetsika tsotra sy tsy andaniam-bola hisorahana ireny. Nanolotra boky vaovao “Fahalalana Mahavonjy”, edisiona fahaefatra, ny Unicef omaly teny amin’ny toeram-pivoriana Galaxy Andraharo, hamoahana ireo paika samihafa hamonjena ny reny sy ny zaza ary ny daholobe ihany koa manoloana ireo aretina sy loza mety hitranga amin’ny fiainana andavan’andro. Araka ny fantatra dia miisa 38 000 ny isan’ny zaza maty alohan’ny fahadimy taonany. Aretin-tratra, fivalanana, tsy fanjarian-tsakafo ary ny tazo no voalaza fa antony voalohany mahatonga izany. Ankizy valo amin’ny folo latsaky ny 14 taona kosa no miaina anaty fahantrana noho ireo antony voatanisa etsy ambony. Boky tsotra kanefa mirakitra fahalalana fototra amin’ny fisorohana sy fiarovana ny “Fahalalana Mahavonjy”.
Misy toko 14 ao anatin’ity rakitra ity ka isan’ireo ny fanelanelanana ny fiterahana, fiterahana iereh-doza dy fahasalaman’ny zaza menavava, fanjarian-tsakafo, fanaovam-baksiny, aretim-pivalanana, tsimokaretina VIH, fiarovana ny zaza, fiatrehana ny hamehana, fahadiovana, isan’ireo toko 14 ao amin’ilay boky. Imasoan’ity boky ity ny serasera, ny fampitana hafatra, ny fanoroana, ny fanentanana miampy fitaomana ny tanora ho mpanova toe-tsaina sy fitondran-tena. Kendrena hampiasa azy kosa ny ray aman-dreny, ireo mpampianatra, ireo mpiasan’ny fahalamana, ireo tompon’andraiki-pikambanana isan-tokony. Efa nanao fampiharana sahady ireo mpianatra ao amin’ny Institut National de Formation des Paramédicaux eto Antananarivo ka 300 sahady no efa nanovo fahalalana momba ny voarakitra ao anatin’io boky io. Ezahina ihany koa hanofana ireo mpianatry ny taona fahatelo ho an’ny toeram-pianarana ao Antsirabe, Morondava, Toamasina ary Toliara.
Fahalalana Mahavonjy mira fiarovana sy fanavotana. Manampy ny ray aman-dreny hikolo sy hikarakara tsar any zanany ny torohevitra ao anatiny mba hahazoan’ny mpianakavy tombony amin’ny fivelarana sy fandrosoana amin’ny lafiny rehetra.